Cajal: Sida loo abuuro Plugin Function Wordpress
Waxaa jira kiisas badan marka dadku u baahan yihiin inay abuuraan shaqadooda shaqadooda. Si kastaba ha ahaatee, qoraallo yar oo SEO ah waxaa jira sharaxaad ku saabsan sida loo abuuro plugin Wordpress ah.
Tilmaamahan SEO-yada ah ee ay bixiso Andrew Dyhan, khabiir hormood ah oo ka socda Semt , waxaad baran doontaa waxa ku xiran WordPress, waa maxay sababta aad u baahan tahay inaad abuurto mid, markaad abuureyso fiilooyin farsamo iyo sida samee. Ugu horreyntii, waa lagama maarmaan, in la bilaabo ogaansho dheeraad ah oo ku saabsan furaha shaqooyinka.
Plugins waa kumbuyuutarka koodhka PHP, kaas oo badiyaaba ku daro tweaks iyo farsamooyinkaaga boggaaga - irraggiamento pannelli in legno. Waxay ka caawiyaan milkiilayaasha bogagga badan inay ku shaqeeyaan shaqooyin badan boggooda WordPress iyagoo horumarinaya farsamoyin shaqeynaya si ay hawshooda u gutaan. Tusaale ahaan, waxaa suurtogal ah in la abuuro plugin kaas oo awoodi kara in uu dib u rogo bog gaar ah mar kasta oo shaqadiisu gaarto. Plugin waa faylka PHP, kaas oo u shaqeeya sida faylka mawduuca ama arrin kale
Faa'iidada farsamada waxay kaa dhigi kartaa inaad kordhiso dhinacyada mawduuca WordPress. Waxay kuu sahleysaa in aad wax ka bedesho qaybaha kala duwan ee maadada iyadoon wax laga beddelin qaybaha muhiimka ah ee muhiimka ah. Mid ka mid ah WordPress khasaare ka mid ah habkan waa in aad lumin karto isbeddeladan markaad cusboonaysiiso, bedesho ama bedesho mawduucaaga. Farsamadani waxay noqon kartaa xal waqti-dhiman oo saameyneysa raadinta. Waxaa intaa dheer, waxaad sidoo kale haysan kartaa qoraalka si aad ugu isticmaashid plugin cusub
Sida loo abuuro plugin WordPress ah
Abuuritaanka fiilo shaqeyn waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu raaxada badan. Ugu horreyntii, waa inaad ka taxaddartaa sameynta iyo hannaanka faylasha PHP. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad abuurto fiilooyinkaaga. Waxaad abuuri kartaa faylka oo waxaad faylka PHP ku qori kartaa. Isticmaal magac la mid ah faylka iyo faylka waa muhiim. Marka xigta, waxaad u baahan tahay tifaftiraha IDE ee aad jeceshahay si aad u buuxiso sixirka.
WordPress plugin wuxuu u baahan yahay madax. Header waa qaybta koowaad ee fiilada. Waxay ka kooban tahay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan fiilada. Macluumaadka madax ka mid ah fiiladaada waxaa ku jiri kara magaca plugin, version of plugin iyo sharaxaad. Tusaale ahaan madax ayaa u eg sida
Waa lagama maarmaan in lagu daro faylka wax lagu akhriyo ee ku jira fiilooyinkaaga. Tan waxaa lagu magacaabaa faylka readme.txt. Halkan waxaad ka soo gudbi kartaa oo aad kicin kartaa plugin